EZONA NDLELA ZIGQIBELELEYO ZOKONGEZA IXABISO KWIKHAYA LAKHO - IIPROJEKTHI ZE-DIY
Eyona iiprojekthi Ze-Diy Ezona ndlela ziGqibeleleyo zokongeza ixabiso kwiKhaya lakho
Apha sabelana ngeendlela ezilungileyo zokongeza ixabiso ekhayeni lakho kubandakanya neentlobo ezithandwayo zokuhlengahlengisa iiprojekthi.
Ikhaya lakho lutyalo-mali, kwaye ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo ezikhoyo zokunyusa ixabiso likhona ithuba elininzi lokwenza ulingano olongezelelekileyo xa unokugqiba ekubeni uthengise.
Ngelixa uphuculo olubandakanya ukukhotha okutsha kwepeyinti, ifanitshala entsha kunye nezinto zoncedo zinokuphucula ubuhle bendlu yakho, olu tshintsho luncinci ludlala indima encinci ekwandiseni ixabiso lalo. Ukuba unomdla wokwenza eyona mali ngepropathi yakho, kufuneka ucinge kakhulu.
Ungalongeza njani ixabiso kwiKhaya lakho
Zingaphi izihlandlo utshatile uDonald Trump
Guqula isiseko sakho (okanye umbe entsha!)
Yenza igumbi le Studio (indlu enezindlu ezizenzekelayo)
Guqula iLoft iye kwigumbi lokulala
Yandisa okanye uhlaziye ikhitshi lakho
Yandisa indawo yokuPhila yangaphandle
Ungalongeza njani ixabiso kwiKhaya lakho kuHlahlo-lwabiwo mali
Lixabiso elingakanani iGaraji elongeza kwiNdlu?
Ngaba iChibi lidibanisa ixabiso kwiNdlu?
Ngaba idesika yongeza ixabiso endlwini?
Ngaba iipaneli zelanga zongeza kwixabiso lendlu?
Ngaba iDrayivu entsha yongeza ixabiso kwiNdlu?
Ngaba uMgangatho weHardwood wonyusa amaxabiso asekhaya?
Lixabiso elingakanani Igumbi lokuhlambela elongezayo kwindlu?
Amanani asemthethweni ayahluka, kodwa uya kujonga ukongeza ukuya kwi-30% yexabiso kwikhaya lakho nge kwigumbi elingaphantsi ukongeza.
Olu khetho luhlala luhlawula izabelo ukuba unepropathi enexabiso eliphezulu ngoko ke kubalulekile ukuqwalasela iindleko ezikhutshelwa ngaphandle kwexabiso lekhaya lakho.
Ukuba sele unendawo engaphantsi, awuyi kuhlawula nawuphi na umsebenzi owongezelelweyo, kwaye nanjengoko indawo ihlelwa 'njengotshintsho lokusetyenziswa', awuyi kufuna imvume yocwangciso. Zombini ezi ndaba zimnandi kwibhalansi yebhanki. Nangona kunjalo, inkqubo iya kuphazamisa kwaye unokufuna ukuphuma okwethutyana.
Ukuba uyakha ukusuka ekuqaleni, inkqubo ukusuka ekucwangciseni ukufakela inokuba nde, kwaye ibize. Kuya kufuneka ujonge ukuba ingaba indlu yakho inokuxhasa uguquko. Kuya kufuneka uyili loyilo kule nkqubo, ke phambi kokuba wazi nokuba ukuguqulwa kwigumbi elingaphantsi kuyindlela efanelekileyo, kuya kubakho iindleko. Ngexesha lokomba, kuyakufuneka uqeshe kwiingcali ukuqinisekisa ukuba ukwakhiwa kugqityiwe ukuya kumgangatho, kwaye kuyahambelana nayo yonke imigaqo. Nangona ezi ndleko zokuqala zinokuba phezulu, kuhlala kufanelekile ukuba uchithe le mali ukuba iqinisekisa ukuba ufumana umgangatho osemgangathweni ongasokuze ufumane iindleko zolondolozo lwexesha elizayo.
Amanani asemthethweni ayahluka, kodwa uya kujonga ukongeza ukuya kwi-30% yexabiso kwikhaya lakho ngokongeza kwigumbi lokuhlala / iflethi.
Oku kunokubonakala ngathi sisisombululo 'phaya ngaphandle,' kodwa, ukuba uhlala kwindawo elungileyo kunokuba kufanelekile ukuba ibango lendawo yokuhlala eqeshiweyo ikhona. Mhlawumbi uhlala kwindawo ekhulayo yabafundi apho le mfuno ihlala ikhona? Mhlawumbi useLondon apho iiflethi zifunwa kakhulu ngenxa yamaxabiso aphezulu emizi? Ngexesha elifutshane uyakuxhamla kwingeniso yerente, nakwintengiso yepropathi kwixesha elide, inzuzo ekuthengisweni.
Ukuguqula indawo yokuhlala kwigumbi lokulala kunokunyusa ixabiso lasekhaya ukuya kuthi ga kwi-10% ukuya kwi-20%
Ngokuvala kwindawo yeloft kunye nokongeza igumbi lokulala ungabhenela kwiintsapho ezinkulu kwaye ngenxa yoko isixa esikhulu sabathengi abanokubakho. Ukuqonda ukonyuka kokongeza igumbi lokulala kabini kunye negumbi lokuhlambela. Bona Okuninzi amagumbi okulala aphezulu Apha.
Amanani asemthethweni ayahluka, kodwa uya kujonga ukongeza ukuya kwi-15% yexabiso kwikhaya lakho nge Ukulungiswa kwekhitshi .
ILloyds Banking Group ichaza indlela abaninimzi abathathu abachitha ngayo ixesha labo ekhitshini. Akumangalisi xa ucinga ukuba ihlala iyindawo apho sihlangana khona kunye nokutya. Ukuvula ikhitshi ngokususa ngokulula iindonga zangaphakathi kunokongeza i-7, 155- $ 59,838 yexabiso kwixabiso lekhaya.
Uyakuqaphela kwezi ngcebiso zingentla ukuba ukwandisa indawo yekhaya lakho - ngendlela enolwazelelelo, kuyakwonyusa ixabiso layo. Ukongeza igumbi lokulala elongezelelweyo endlwini yindlela eqhelekileyo nefanelekileyo yokunyusa ixabiso, kwaye inokufezekiswa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngaphandle kokungongezwa njengexabiso elingaphantsi, uguquko kwigumbi lokulala kwigumbi lokulala lisenokongeza i-10% -12.5%. Nangona kunjalo, ii-en-suites kunye nokugcinwa okwaneleyo ngoku kujongwa 'njengezinto ekufuneka zenziwe' kumagumbi okulala kule ndawo, ke jonga oku ngaphambi kokuguqula.
Akunyanzelekanga ukuba ube nobukhazikhazi njengezindululo zingasentla zokunyusa ixabiso lakho lasekhaya.
Ukufaka indawo yokumema okanye isithuba sepatiyo Unokonyusa amaxabiso okuthengisa kwakhona ukuya kuthi ga kwi-10%
Olu hlobo lokongeza lusebenza ngokukodwa kwiindawo ezixineneyo zasedolophini apho ukuhlala ngaphandle kunye negadi yendawo ebaleka khona. Ukuzisa izityalo ezilungiswe kakuhle kunye nokulungiswa komhlaba kungashiya umbono wokuqala onokuthi uncede umthengi azibone sele elapho.
Cinga isibheno sokubamba -Ngaphandle kwekhaya lakho kunokuba nefuthe kwizigqibo zomthengi ngaphambi kokuba bangene ngaphakathi kwipropathi. Utshintsho olulula olunje ngomnyango ongaphambili ohlaziyiweyo, ukhula kancinci, ukukhotha ipeyinti entsha ecingweni okanye ekunikezeleni kungenza umahluko omkhulu.
Penda amagumbi -Ukongeza idyasi entsha yepeyinti kwiindawo zokuhlala kunokuba yeyona ndlela isebenzayo yokunyusa ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya. Zama ukongeza imibala yepeyinti engathathi hlangothi ukubhenela kwelona nani liphezulu labathengi abanokubakho.
Buyisela nawaphi na amanqaku exesha -Iimpawu zexesha ngumzobo kubathengi abanqwenela imbali encinci kunye nomlinganiswa.
Yiya eluhlaza - Cinga ngendlela yokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwakho ngokukhazimla okuphindwe kabini, iiphaneli zelanga, iimpompo zobushushu, ukufakelwa kophahla kunye neeinjini zomoya. Uya konga imali kwixesha elifutshane kwaye nje ukuba uthengise, le ndlela yokuphila efanelekileyo iya kuhenda nabaphi na abathengi abanomdla wokunciphisa iindleko zamatyala abo.
Yongeza ukugcinwa komhlaba ophantsi -Ukonyusa umda wokuthenga isibhengezo kwizityalo zokucoca uyilo. Xa ukhetha ukuya kwizityalo ezizalelwe kuloo ndawo kunye nembalela enganyangekiyo ukunceda ukunciphisa iindleko zamanzi kunye neendleko zokugcina.
Susa isilingi sepopcorn - Olu hlobo lwesilingi ukuthungwa kuphelelwe lixesha kwaye kucinyiwe abathengi abaninzi basekhaya. ungayikrwela kude njengeprojekthi ye-DIY yokuqesha ikontrakta yendawo ukuyisusa.
Hlola kwaye ulungise -Qasha umhloli onokukunceda ufumane iingxaki ezingabonakaliyo ngaphakathi kwekhaya ezinokuchaphazela kakubi ixabiso lokuthengisa.
Amanani asemthethweni ahluka ngokuxhomekeka apho uhlala khona, kodwa ngesiqhelo uya kujonga ukongeza ukuya kwi-11% yexabiso kwikhaya lakho.
Ukuba ucinga nzulu ngolu khetho, kufanelekile ukuba ucinge ngobungakanani begaraji okhetha ukuyakha. Kule mihla, zimbalwa iigaraji ezibanzi ngokwaneleyo ukuba zinokugcina imoto yale mihla - uninzi lwazo luguqulwa lube ligumbi elongezelelweyo ngenxa yesi sizathu. Ukuba unako, cinga ngokwakha igaraji ephindwe kabini; uya kuba nendawo eyaneleyo yokupaka, kunye negumbi lokusebenza emotweni. Kwaye, ukuba unako ukuhlawula, unokwenza ulwandiso ngaphezulu kwegaraji kwigumbi elikhulu kakhulu; uxhamla kakhulu kwixabiso lekhaya lakho.
Kungenjalo, ukuba awuqinisekanga ukuba igaraji enye iya kuhlawula izabelo, kwaye ukuba unendawo yokupaka, kutheni ungenzi igumbi elongezelelekileyo endaweni yale garaji ikhoyo ngoku? Kukwanokwenzeka ukuba awuzukufuna imvume yocwangciso kolu tshintsho.
Ngokwesiqhelo a ipuli yokuqubha inokunyusa kuphela ixabiso lakho lokuthengiswa kwakhona nge-7% ephezulu.
Ngelixa ngokuqinisekileyo zibukeka zintle, zikwabiza kakhulu ukuzigcina. Abathengi abanokubakho banokukhutshelwa ngaphandle echibini ukuba banexhala malunga nokhuseleko losapho lwabo, okanye uxinzelelo lwesondlo.
Ewe ixabiso lokwenyani ledama lokuqubha liyahluka ngokuxhomekeka apho uhlala khona. Kwiindawo ezishushu kakhulu ukongezwa kwephuli kunokunyusa ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya lakho ukuya kuthi ga kwi-11%. Ngapha koko, kwiindawo ezinje ngePalm Springs ezingenalo iphuli zinokuphazamisa abathengi banokuba ngabathengi.
Kwinqanaba lentengiso, imbuyekezo kutyalo-mali kufakelo lwidesika ihlala ijikeleze i-106%. Ixabiso eliphezulu kumgangatho wedesika, ezantsi ipesenti yeendleko ezifunyenwe kwindawo yentengiso. Ndwendwela eli phepha legalari izimvo kumgangatho .
Ngelishwa akunjalo. Ngelixa benokwenza umahluko kumninimzi okhoyo ngokweemali ezincitshisiweyo zamandla, ngekhe benze umahluko kwixabiso lekhaya lakho elithengiswayo.
Ewe, ukuqala kokubonakala kuhlala kubala, kunye notyalo mali oluncinci lwe ukuqhuba Ungongeza ngaphezulu kwe- $ 16,000 kwixabiso lepropathi yakho.
Imigangatho yomthi okhuni inokongeza ukuya kuthi ga kwi-2,5% kwixabiso lekhaya lakho. Nangona kunjalo, imbuyekezo yakho kutyalo-mali iya kuhlala phakathi kwe-70% ukuya kwi-80% yeendleko. Oku kuthetha ukuba ukuba ufaka umthi onzima phambi kokuba uthengise ikhaya lakho uya kuphulukana nemali. Umbono ongcono kunokuba kukufaka i-vinyl okanye i-laminate floor ebiza ixabiso elincinci. Jonga ukuthelekisa kwethu okupheleleyo laminate vs imigangatho elukhuni Apha.
Amanani asemthethweni ayashiyana, kodwa ukuba uthatha isigqibo sokuthenga igumbi lokuhlambela elitsha kwikhaya eliqhelekileyo, uya kujonga ukongeza ukuya kuthi ga kwi-10% kwisithuba sebhafu, kwaye ukuya kuthi ga kwi-20% kwibhafu epheleleyo kwixabiso lekhaya lakho. Ukuba unendlu enamagumbi okulala ngaphezulu kuneendawo zokuhlambela, ukongeza indawo yangasese eyongezelelweyo iya kuba nefuthe elikhulu ekunyukeni kwexabiso lekhaya. Ukongeza igumbi lokuhlambela elipheleleyo kunesiqingatha sokuhlambela kunokubonelela ngokunyuka okuphezulu ngexabiso.
Nangona kunjalo, ukuba uthatha isigqibo sokongeza igumbi lokuhlambela kanye ngaphambi kokuthengisa unokubuyisa kuphela isahlulo seendleko zakho. Njengoko isongezo esitsha sokuhlambela sinokubiza ukusuka kwi-40,000 ukuya kwi-60,000 yeedola, unokubona ukubuya okungange-67% yemali yakho kwi-West Coast kunye ne-48% kwi-East Coast. Ngesi sizathu kungumbono olungileyo ukongeza igumbi lakho lokuhlambela ngaphambi kokuba uthengise ukunika ixesha lokuxabisa ukusetyenziswa kwalo.
Ngelixa ngaphandle kwamathandabuzo ukongezwa kwendawo yokuhlambela kunokunceda ukunyusa ixabiso lokuthengisa kwakhona, awungekhe ulubuyise lonke utyalomali lwakho rhoqo remodel yokuhlambela . NgokweMagazini yokuHanjiswa ngokutsha kweendleko ixabiso eliphakathi lesilungiso sokuhlambela lijikeleze i-18,000 yeedola kwaye imbuyekezo ekulindelwe kutyalo-mali ijikeleze ama-66%.
Isikhumbuzo somama notata
iindinyana zetestamente endala ngothando
uyithengisa kanjani ilokhwe yam yomtshato
iwindow yokuhlala ekhitshini